Wareegtada Caga-saareyaasha & Clip Cord Soo-saareyaasha, Shirkadaha Alaabada - Shiinaha Warshadaha Cagta Beddelka & Wareegga Wareegga
Ahama biraha Tattoo ee birta ahama
Magaca badeecada: Birayaasha birta ahaanta ah (weyn iyo weynba) Weyn: Cabbirka baydalka: 70 * 105 * 25.5mm cabbirka baakadka: 120x80x72mm Yar: Cabbirka baaldiga: 60 * 76 * 25.5mm cabbirka baakadka: 103x75x62mm Weyn: Miisaanka saafiga ah: 284g Miisaanka guud: 311g Yar: Miisaanka saafiga ah: 261g culeyska guud 285g Dhererka Cable: 2m Dhibic Iibinta: 1. Waxyaabaha birta ahama, culeyska ku filan, ma daxlaysan doono, xirmo u adkeysan karo oo sahlan in la nadiifiyo 2. Waxaa jira suufad kahortag caag ah oo saaran baydalka kore iyo kan hoose, naqshad aan siibiibix ahayn, dareemid cag jilicsan, oo khayaanayn karta ...
Beddelka Cagaha Tattoo-ga ee Cusub
Sariir caag-ka-hortagga ah oo leh jeexjeexyo dusha sare ah si loo hagaajiyo. Qalabka taleefanka wuxuu ku xiraa wax kasta oo awood tattoo ah. Faahfaahinta: Midabka: Waxyaabaha Madow: Dhererka Xadhig Acrylic: Qiyaas ahaan. Liiska Xidhmada 1.5m / 5ft: 1 * Tattoo Foot Switch Pedal Packing & Delivery Si fiican loo hubiyo badqabka badeecadaada, xirfadle, bey'adeed u fiican, adeegyo baakad ku habboon oo hufan ayaa la bixin doonaa. MACLUUMAAD GAADI AH 1. Maraakiibta adduunka oo dhan ma rartaa? Haa, Waxaan ka shaqeyneynaa keenista WJX eve ...
Wareegga 360 Darajo Mashiinka Tattoo Cagta Beddelka Cagta Bawdada
Midabka: madow 1. Badeecadaha 360-degree, oo ay kuxirantahay silig silikoon jilicsan, dhererka siliggu waa 1.75 mitir; 2. Naqshadeynta aan sibiibix ahayn ee salka hoose waxay si weyn u xoojineysaa isku dheelitirnaanta isku dhaca sagxadda, mana jiri doonaan dhib dambe oo dhaqdhaqaaqa cagaha inta lagu jiro taatuuga; 3. Xiddigle shan gees leh oo beddela, dhaqdhaqaaq yar oo micro ah (riix si aad u furto, riix si aad u xidho), oo ku habboon dhammaadka iyo adkeysiga, Adeegsiga qalab tayo sare leh, muuqaal qurux badan; 4. Si adag ayaa loo tijaabiyey ka hor intaadan ka bixin warshadda; 5. Cagta sw ...
Kediska Xannibaadda Tattoo Xirfadlaha Xirfadlaha
Tattoo lugta lugta ayaa fure u ah sawirka. Waxay leedahay nashqad-baddal xasaasi ah oo sarreeya, oo cagtaadu cagta saareyso, waxay ka dhigi doontaa mashiinka tattoo-ga awood. Waxyaabaha Daawaha ah, si dhab ah u xaqiiqso 360 ° dhammaan hareeraha ku-xirnaanta degdegga ah, geeska ma dhiman. Astaamaha: Waxyaabaha laysku daro, si dhab ah u xaqiiqso 360 ° dhammaan hareeraha habsami u socodka, oo aan lahayn gees dhinta. Waxay ka dhigeysaa cagtaada mid aad u raaxo badan, ku haboon in la dhaqaajiyo, yareeyo daalka farshaxanka daalka ah. 65 qaybood oo silig naxaas saafi ah oo leh koronto xoog leh ...
Beddelaadda Cafimaadka Tayada Sare ee Tayada Cusub
Waxqabadka: Xirfadlaha lugta xirfadeed ee korontada Magaca: Tattoo footpedal Xidhmada waxaa ka mid ah: 1pc Color: wuxuu ku soo diri doonaa si aan kala sooc lahayn Faa'iidooyinkayada Waxaan leenahay in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah oo laga soo dhoofiyey Yurub Suuqa Mareykanka .Waxaan nahay Kooxda Bixinta Tattoo, soo dhaweyn diirran si aan u aqbalno OEM yar amarro. Xidhiidh aad u fiican, Adeegyada ugufiican, Tayo lagu damaanad qaaday sicirka iibka tooska ah ee warshadda! OEM waa la soo dhaweynayaa. Maraakiibta: 1. SHAXDUUBTA DUNIDA OO DUNIDDA AH. 2. Amarada la shaqeeyay waqtigooda ka dib cadeynta lacag bixinta. 3. Waxaan o ...
Badeecada Tatoo-ga oo ah 360-degree
Magaca Shayga: Tatoolaha lugta Tattoo Waxaa jira 6 nooc oo loo yaqaan 'Tattoo pedal pedal pedal'. Tattoo lugta lugta ayaa ku habboon qalabka korontada iyo mashiinka sawirka. Si fudud loo hawlgalo loona isticmaalo, miisaanka culus, si fudud loo qaado. Ka dhigista sawirkaaga mid fudud oo sahlan. Qalabka farsamada xirfadeed ee farshaxanka ee loogu talagalay farshaxanada tattoo. Astaamaha: Muuqaal qurux badan iyo qaabeyn. Ku habboon dhammaan noocyada mashiinka mashiinka mashiinka tamarta. Bedelaha baydalka lugta ayaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo leexashada mashiinka sawirka. Khadadka isku xidhka ayaa ku filan in la ...
Mashiinka Tattoo Mashiinka Tayada Sare ee Beddelka Laydhka Laydhka Caga Bixinta
Sariir caag-ka-hortagga ah oo leh jeexjeexyo dusha sare ah si loo hagaajiyo. Qalabka loo yaqaan 'phono-plug' wuxuu ku xiraa wax kasta oo loo helo 'tattoo tattoo'. Balka lugta waxaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo biiro koronto mashiinka sawirka. Baydalkaani waa tayo aad u fiican oo aad u fiican. Liiska Xidhmada: 1 * Tattoo Foot Switch Pedal Adeegyadeena 1. Bixinta sheegitaanka 2 saacadood. 2. Dhammaan emayllada waxaa lagu soo jawaabi doonaa 24 saacadood gudahood. 3. Lacagta muunadda ayaa la soo celin doonaa markii amarka la xaqiijiyo. Su'aalaha la Weydiiyo 1. Sideen ku heli karaa shay-baarka si aan u hubiyo tayada alaabta? ...
Square Baydalka Caaga Tattoo cagta
Badeecadani waa u fududahay in la isticmaalo oo si fiican ayey kuugu shaqeyn doontaa. Maxaa diidaya in hadda la eego? Astaamaha: Dusha sare ee skid-ka iyo suntan ka hortagga gumaadka, ayaa adiga iyo dabaqaaga ilaalin doonta. Madow leh qaab fudud oo laba jibbaaran, qalab wanaagsan oo loogu talagalay tattoo. Waara oo sahlan in la isticmaalo, xulashada ugu fiican ee qurxinta qurxinta. Iftiiminta iyo kala dheereynta boosaska, si fiican ayey adiga kuugu shaqaysaa. Ku habboon dhammaan noocyada mashiinka tattoo. Noocyada: Tattoo Foot Pedal Waxyaabaha: Cabbirka Qalabka Cabbirka: Qiyaas ahaan. 9 * 6 * 2cm / 3.5 * 2.4 * 0.8in (L * W * H) Culayska Shayga: Ap ...
Xiddiga shan gees leh ee wareega 360 Tattoo Pedal
Round 360 Star Tattoo Foot Switch Pedal Stainless Steel Pedal For Tattoo Machine Tattoo Power Supply Specification Qeexitaanka Tattoo Foot Pedal / Lugta cagaarshowga waa xirfad lugeeye xirfad leh oo run ah oo si fiican u shaqeeya! Waxay leedahay baydalka beddelka lugaha ee sagxadda lidka ku ah, saldhigna aan ka-dhicin. Ku habboon noocyada korontada ee Mashiinnada Tattoo oo dhan. Astaamaha Tayada sare ee lugta lugta leh ee tatuuka, moodada! Tayo-xirfadeed, baal lug-beddelasho leh anti-taraarax, saldhig aan murugo lahayn. Waara, is haysta, fududahay in la qaado lana isticmaalo ...
Kuweena ayaa daawanaya xaraashka '360Â ° Star Design Tattoo Foot Pedal' oo leh 5′ft xadhig iyo heerka 1/4 ″ taleefanka-fiilada. Astaamaha sal-ka-hortagga marin-ka-hortagga Fududeynta helitaanka naqshadeynta waxay bixisaa xakameyn mashiin heer sare ah. Waxaan haynaa xirmooyin ballaaran oo xirmooyin iyo qalabyo ah oo aan kala dooran karno. Macluumaadka Tilmaamaha: Xaaladda: Nooca cusub 360Â ° Star Design Design Tattoo Foot Pedal Length: 5′ft Color: Silver Standard 1/4 ″ telefoonka-biraha-birta-birta ah. Saldhigga ka-hortagga gumaadka Cabbir: 3 Â½ ”x 3 Â
Xiro Xadhig Tattoo Clip & Xadhigga RCA
Mashiinka ugu dambeeya ee mashiinka taranka ee silikoon-ka & Xadhigga RCA 6 fuudh oo dherer ah (qiyaastii 180 cm) dhumucdiis: qiyaastii 6 mm tayo sare leh 100% silikoon jilicsan, 22 silig naxaas ah oo AWG ah Meel kasta oo isku xirnaanta ah waxaa lagu duubay tuubbo balaastig ah si looga hortago Burburka Magaca: Clip Tattoo Xadhig, RCA Xadhig Maad: Silicon / Copper Isticmaal: Loogu talagalay mashiinada tattoo Midabka: Madow Jaale Cagaar Buluug Casaan Casaan Su'aalo Badan 1. Sidee Buuxinta? - Xidhmada Tilmaamaha MOLONG Tattoo, Xidhmo Dhex-dhexaad ah, Xidhmada OEM (Tiro Badan) oo La Heli karo 2. Sidee ku saabsan tayada? - Qu ...
Xiriirka DC & RCA ee xarig koronto
Miisaanka saafiga ah: 27g Miisaanka guud: 38g Cabbirka: 2m * 1.8mm Xirxirida: baakada boorsada opp Midabka: seddex midab madow - wareeg cas - buluug Isdhexgalka: Xiriirka RCA Faa'iidada: 1. Xarig jillaab ah oo aad ufiican oo leh qaab joogto ah, tayo wanaagsan iyo tayo adag; 2. Isku-xirnaanta naxaas saafi ah, darajo sare, xirta adkaysi; 3. Cabbirka guud ee caalamiga ah, waad iibsan kartaa oo u adeegsan kartaa si kalsooni leh; 4. Isku xirnaanta silikoonku waa sii dhumuc weyn yahay, anti-jab iyo anti-crack; Su'aal S Ka waran waqtiga dhalmada? Waqtiga Gaarsiintu waa 3-5 maalmood ...